बुद्धिस्ट दर्शन र त्रिपिटक भनेको के हो ? «
बुद्धिस्ट दर्शन र त्रिपिटक भनेको के हो ?
प्रकाशित मिति : १२ जेष्ठ २०७६, आईतवार २०:३६
भगवान बुद्धले आफ्नो उपदेशलाई त्यस समयको साधरण भाषा भईराखेको पाली भाषाबाट बुझ्न सजिलो भएकोले प्रचार-प्रसार गर्नुभयो । सुर्यको किरण झै वहाँको उपदेश सबैलाई समान रुपले प्राप्त भयो । भगवानको महापरिनिर्बाण भइसकेपछी कास्यप, आनन्द आदि वहाँका मुख्य मुख्य सिस्यहरुले राजगृहमा बुद्धबचनको संगायन गर्नुभयो । धर्म तथा बिनयको संग्रह गर्नुभयो । १०० बर्षपछी स्थबिरहरुले दोस्रो संगिती गर्नुभयो, यश सभा बैसालिमा सम्पन्न भएको थियो । यश सभामा ७०० जना अर्हत भिक्षुहरु सम्मिलित हुनु भएको थियो । असोक महाराजाको पालामा आचार्य मौदगाली पुत्रको प्रधानत्वमा पाटलिपुत्रमा तेस्रो सांगिती भयो । आजसम्म प्राप्त भैइसकेको त्रिपिटकका रुप यश प्रकारको रहेको छ ।
(ख) बिनय पिटक:- (१) पाराजिका पाली (भिक्खुबिभङ) (२) पाचित्तिय पाली (३) महाबग्ग (४) चुलबग्ग (५) परिवार पाली ९ग० अभिधम्मपिटक (१) धम्मसङणि (२) बिभङ (३) कथावत्थु (४) पुग्गलपञ्ञ्चती (५) धातुकथा (६) यमक (७) पट्टान
बिनयपिटक भनेको के हो ??